Windows 10 – Ukusekela Windows 10
Continue reading “winlogon.exe Ukusetshenziswa kokungena ku-Windows”
Author SupportPosted on 05/07/2018 Categories Windows 10Tags winlogon.exeLeave a comment on winlogon.exe Ukusetshenziswa kokungena ku-Windows
DataExchangeHost.exe Umsingathi Wokushintshana Ngemininingwane yinkqubo esebenza njenge-component item model (COM) uhlelo lokusebenza ngaphakathi kweseva ye-‘DeaseExchange Host Host ‘COM.
Continue reading “DataExchangeHost.exe Umsingathi Wokushintshana Ngemininingwane”
Author SupportPosted on 17/06/2018 17/06/2018 Categories Windows 10Tags DataExchangeHost.exeLeave a comment on DataExchangeHost.exe Umsingathi Wokushintshana Ngemininingwane
mshta.exe I-Microsoft (R) HTML Application umnininhlangano – ifayela eliphathekayo ku-Windows, elakhiwe yi-Microsoft Corporation futhi linikezwa uhlelo lokusebenza. Isici siyisizathu sokuqalisa uhlelo lokusebenza lwe-Microsoft HTML – uhlelo olubhekene nokusebenza kwezicelo ze-HTML-based (.hta amafayela) nokusebenzisa izikripthi ku-Windows.
Continue reading “mshta.exe I-Microsoft (R) HTML Application umnininhlangano”
Author SupportPosted on 11/06/2018 Categories Windows 10Tags mshta.exeLeave a comment on mshta.exe I-Microsoft (R) HTML Application umnininhlangano
Thola usizo nge-app yomculo i-Groove
Ukuze uthole usizo nge-Groove, faka umbuzo wakho ebhokisini lokucinga kubha yomsebenzi. Uzothola izimpendulo ezisuka ku-Cortana noma i-Bing.
Author SupportPosted on 20/05/2016 20/05/2016 Categories Windows 10Tags Cortana, i-Groove, Windows 10, Windows 10 MobileLeave a comment on thola ukusekela nge-app yomculo i-groove
ikuphi iphrinta yami ku-windows 10 mobile?
Awuyitholi iphrinta yakho kuhlu? Qiniseka ukuthi ivuliwe futhi ixhunyiwe kunethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi njengocingo lwakho. Uma ungayitholi, hlola ukuthi iphrinta yakho iyahambelana yini nokuphrinta kwe-Windows 10 Mobile.
Author SupportPosted on 28/01/2016 28/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, Windows 10 MobileLeave a comment on ikuphi iphrinta yami ku-windows 10 mobile?
shintsha isifunda sakho sesitolo se-windows
Uma uthuthela ezweni elihlukile noma isifunda, shintsha isethingi yesifunda sakho ukuze uqhubeke nokuthenga Esitolo. Qaphela: Imikhiqizo eminingi ethengwe Esitolo Se-Windows kusifunda esisodwa ngeke isebenze kwesinye. Lokhu kuhlanganisa i-Xbox Live Gold ne-Groove Music Pass, ama-app, imidlalo, umculo, amamuvi, nezinhlelo ze-TV.
Continue reading “shintsha isifunda sakho sesitolo se-windows”
Author SupportPosted on 27/01/2016 27/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, Windows Store, XboxLeave a comment on shintsha isifunda sakho sesitolo se-windows
hambisa izinto kusuka ku-app yohlu lokufunda kuya ku-microsoft edge
Kukhona uhlu lokufunda olwakhelwe ngaphakathi ku-Microsoft Edge, isiphequluli esisha ku-Windows 10. Uma usebenzise i-app Yohlu Lokufunda ku-Windows 8.1 futhi manje usubuyekezele ku-Windows 10, hambisa izinto ukusuka ku-app endala uzihambise ku-Microsoft Edge.
Ku-app ethi Uhlu Lokufunda, khetha into ukuze uyivule ku-Microsoft Edge.
Continue reading “hambisa izinto kusuka ku-app yohlu lokufunda kuya ku-microsoft edge”
Author SupportPosted on 27/01/2016 27/01/2016 Categories Windows 10Tags Microsoft Edge, Windows 10Leave a comment on hambisa izinto kusuka ku-app yohlu lokufunda kuya ku-microsoft edge
shintsha ukubuka phakathi kwe-3d (kusuka ngaphezulu) nomgwaqo
tshintsha iimbonakalo phakathi kwembonakalo ye-3d (yomoya) neyendlela
Uma ubhekene ukuhlola imizi 3D, ubhekene empeleni yokubuka imephu in sendawo. Ukuze ushintshe emuva umbono emgwaqeni, khetha Map imibono, bese ukhetha Road.
Author SupportPosted on 26/01/2016 26/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10Leave a comment on shintsha ukubuka phakathi kwe-3d (kusuka ngaphezulu) nomgwaqo
guqula injini yokucinga emisiwe ku-microsoft edge
I-Microsoft incoma i-Bing ukuze uthole okuhlangenwe nakho kokucinga okuthuthukisiwe ku-Microsoft Edge nge-Windows 10. Ukugcina i-Bing njengenjini yakho yokucinga emisiwe kukunikeza:
Izixhumanisi eziqondile kuma-app we-Windows 10, kukuyisa ngokuqondile kuma-app wakho ngokushesha.
Iziphakamiso ezifaneleka nakakhulu ezisuka ku-Cortana, umsizi wakho wedijithali womuntu siqu.
Continue reading “guqula injini yokucinga emisiwe ku-microsoft edge”
Author SupportPosted on 25/01/2016 25/01/2016 Categories Windows 10Tags Microsoft Edge, Windows 10Leave a comment on guqula injini yokucinga emisiwe ku-microsoft edge
thola usizo nge-xbox ku-windows 10
fumana uncedo nge-xbox kwi-windows 10
Ukuthola usizo lokusebenza Xbox, faka umbuzo wakho ebhokisini on the taskbar. Uzothola izimpendulo ezivela Cortana noma Bing.
Zama “Yini uhlelo lokusebenza Xbox?” Noma “Yini a gamertag?” Uma lokho kungasebenzi, abe look at the Gaming & page ukuzijabulisa kwi website Windows.
Vakashela Xbox emphakathini
Thola usizo Xbox support
Author SupportPosted on 25/01/2016 25/01/2016 Categories Windows 10Tags Windows 10, XboxLeave a comment on thola usizo nge-xbox ku-windows 10